Indlu yezivakashi ohlangothini olunelanga lwe-Alps
Hotemaže, Kranj, i-Slovenia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Ajda
Indawo yethu iseduze nezintaba, umfula omuhle i-Kokra ofanele ukubhukuda ehlobo, i-Krvavec, i-Kranj. Siphinde sibe namachibi okubhukuda amabili. Iseduze nesikhumulo sezindiza iLjubljana (ngaphansi kwemizuzu eyi-10 ngemoto), iLjubljana (25 km), iBled (20 km), Kamnik-Savinja Alps. Uzoyithanda indawo yethu ngenxa yokuma kwayo, itholakala epulazini le-organic permacultural, elinendawo eningi yangaphandle kanye nezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo. Indawo yethu ilungele izithandani, abantu abazihambela bodwa, imindeni (enezingane), kanye namaqembu amakhulu.
Yindlu yamapulangwe enesitolo sasepulazini esitezi esiphansi kanye nefulethi esisitezi sokuqala esiqashisayo. Itholakala epulazini le-organic Ekološka kmetija Pri Šuštarju, elinezilwane zasemapulazini njengezimvu, izingulube nezinkukhu, namasimu anemifino. Kukhona namachibi okubhukuda ongawasebenzisa.
4.85(42 okushiwo abanye)
4.85 out of 5 stars from 42 reviews
4.85 · 42 okushiwo abanye
Le ndawo isendaweni encane yase-Hotemaže, endleleni esuka e-Kranj iya e-Jezersko. Kunomfula omuhle i-Kokra ohamba ibangana nje ukusuka kule ndawo, olungele ukubhukuda ehlobo, kodwa kusabanda impela. Iseduze nehlathi futhi kunombono omangalisayo wezintaba ze-Alps, eziqhele ngemizuzu eyi-10 nje ngemoto.
I am a 23-year-old recent graduate of Cognitive Science at the University of Edinburgh, from Slovenia. At our family organic farm, we offer guests a relaxing holiday in nature.
Mina noma abazali bami sizotholakala endaweni noma ocingweni kanye ne-imeyili.
UAjda Ungumbungazi ovelele